InDesign | को आधार ग्रिड मूल लेआउट ट्यूटोरियल | क्रिएटिव अनलाइन
InDesign आधार ग्रिड | लेआउट डिजाइनरहरूको लागि ट्यूटोरियल
लुआ लौरो | | ग्राफिक डिजाइन, ट्यूटोरियलहरू
यदि तपाइँ सुरू गर्दै हुनुहुन्छ सम्पादकीय डिजाइनमा तपाईलाई लेआउट कसरी गर्ने जान्नुपर्दछ सही रूपमा तपाइँलाई प्रदान गरिएका पदहरू। यसका लागि, केहि अवधारणाहरूसँग परिचित हुनु आवश्यक छ र हामीले विभिन्न कन्फिगरेसनहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ जुन हामीले लेआउट प्रोग्राममा बनाउन सक्छौं InDesign। यस अवसरमा हामी तपाइँसँग आधार ग्रिडको बारेमा आधारभूत धारणाहरूको शृंखला साझा गर्दछौं जस्तै यो के हो, केको लागि प्रयोग हुन्छ, के प्रकारहरू हुन्छन् र कसरी यो कन्फिगर गरिएको छ। धेरै ध्यान दिनुहोस्!
1 आधार ग्रिडको बारेमा उठ्ने मुख्य प्रश्नहरू
1.1 InDesign आधार ग्रिड के हो र यो केको लागि प्रयोग गरिन्छ?
1.2 कुन प्रकारको बेस ग्रिड InDesign मा छन्?
1.3 म कसरी मेरो आधार ग्रिड कन्फिगर गर्न सक्दछु?
आधार ग्रिडको बारेमा उठ्ने मुख्य प्रश्नहरू
InDesign आधार ग्रिड के हो र यो केको लागि प्रयोग गरिन्छ?
यो बारेमा छ काल्पनिक तेर्सो रेखा को सेट हाम्रो कागजातहरूको पृष्ठहरूमा ग्रंथहरूको सही प्लेसमेन्टको लागि प्रयोग गरिएको र यसैले एक व्यवस्थित उपस्थिति छ। तिनीहरू डिजाइनरलाई अन्य ग्राफिक तत्त्वहरू (छविहरू, प्रतीकहरू, आदि) समर्थन गर्नका लागि गाईडको रूपमा पनि काम गर्छन्।
आधार ग्रिड यो डिजाइनरका लागि केवल मार्गदर्शक हो, जुन कुनै पनि हालतमा हाम्रो कागजातहरूमा छापिने छैन। यो एक दृश्य अभिमुखीकरण हो जसले हामीलाई राम्रो लेआउट बनाउन मद्दत गर्दछ।
कुन प्रकारको बेस ग्रिड InDesign मा छन्?
कागजात आधार ग्रिड। यस ग्रिडको कन्फिगरेसनले प्रभाव पार्छ र हाम्रो कागजातमा सबै पृष्ठहरूमा समान रूपमा लागू हुनेछ। यो ग्रिड पूर्वनिर्धारित रूपमा अवस्थित छ हाम्रो फाईलहरूमा के हुन्छ त्यो डिफल्टद्वारा लुकेको हुन्छ। हामी यसलाई दृश्यात्मक बनाउन र यसलाई हाम्रो अनुकूलन गर्न सक्दछौं हाम्रो कागजातको कन्फिगरेसन अनुसार। यसको अनुकूलनका लागि अगाडि बढ्न हामीले सम्पादन> प्राथमिकता> ग्रिड> बेस ग्रिड (विन्डोजमा) वा InDesign> प्राथमिकताहरू> ग्रिडहरू (म्याकमा) जानु पर्छ।
पाठ बक्सको आधार ग्रिड। यो विकल्पले हामीलाई अनुमति दिन्छ बिभिन्न आधार ग्रिड लागू गर्नुहोस् हामीले चाहेको टेक्स्ट बक्समा। यसैले हामी कागजातको आधार ग्रिडका अनुसार सबै टेक्स्ट एलाइन र अर्को प्यारामिटरको आधारमा बाकस एलाइन हुन सक्छौं। यो गर्नका लागि, मात्र बक्स चयन गर्नुहोस् र वस्तु> पाठ फ्रेम विकल्पहरू> बेसलाइन विकल्पहरू (दुबै विन्डोज र म्याक) मा जानुहोस्।
म कसरी मेरो आधार ग्रिड कन्फिगर गर्न सक्दछु?
ग्रिडले पाठको रेखा स्पेसिंग प्रतिनिधित्व गर्दछ हाम्रो कागजात को। त्यसकारण, हाम्रो ग्रिडको प्यारामिटरहरू परिवर्तन हुनेछ कि हाम्रो फन्टको मुख्य भाग १ p pt छ (यसको १ 14..16,8 pt को अग्रणी हुनेछ) वा १२ pt (एक १ leading. p pt को अग्रणी)। त्यो अन्तिम विकल्प हामीसँग फाईलमा डिफल्टद्वारा हुन्छ।
हामी हाम्रो कागजातको आधार ग्रिड कन्फिगर गर्न लागेका छौं। हामी InDesign खोल्छौं र यसको साथ, नयाँ कागजात। हाम्रो केसमा, हामी मानलाई त्यस्तै छोड्छौं (A4 पृष्ठ आकार, १२.12,7 मिमी मार्जिन, १ एकल स्तम्भ)। हामीले १२ pt टाइम्स र १.1..12 pt लाइन स्पेसि onमा निर्णय गर्‍यौं। एकचोटि यो अन्तिम मान ज्ञात भयो र हाम्रो मार्जिनहरू ध्यानमा राख्दै (विशेष गरी हाम्रो माथिल्लो मार्जिनमा), हामी हाम्रो आधार ग्रिड कन्फिगर गर्न अगाडि बढ्छौं।
सम्पादन> प्राथमिकताहरू> ग्रिडहरू> बेस ग्रिड (विन्डोजमा) वा InDesign> प्राथमिकताहरू> ग्रिडहरू (म्याकमा) जानुहोस्। अब हामीले तीन क्षेत्रलाई नजिकबाट हेर्नुपर्दछ: मुख्य पृष्ठ, सन्दर्भमाeप्रत्येक बढाउनुहोस्.
डायलग बक्स जसमा हामी हाम्रो आधार ग्रिडको प्यारामिटरहरू कन्फिगर गर्नेछौं
En मुख्य पृष्ठ हामीले हाम्रो अपर मार्जिनसँग मिल्दो मान प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। हाम्रो केसमा, किनकि यो फिगर हो कि InDesign ले डिफल्ट रूपले ल्याएको छ, हामी यसलाई १२.12,7 मिलिमिटरमा छोड्नेछौं।
En सन्दर्भमा हामी चाहेको विकल्प छनौट गर्नेछौं। यदि हामी पृष्ठको शीर्ष जाँच गर्छौं भने ग्रिड सम्पूर्ण पृष्ठमा लागू हुनेछ (मार्जिन सहित)। यदि हामीले माथि मार्जिन चयन गर्यौं भने ग्रिड यसको लागी लागू हुनेछ। हामी यसलाई यो दोस्रो विकल्पमा छोड्नेछौं।
फ्रेम मा प्रत्येक बढाउनुहोस् हामी हाम्रो लाइन स्पेसिंग अनुरूप मान राख्छौं: १.14,4..XNUMX pt।
यस कन्फिगरेसनमा ठीक छ पछि, तपाईंले अझै आधार ग्रिड देख्नुहुन्न? होईन। तपाइँ मेनू दृश्य> ग्रिड र गाईडहरू> देखाउनुहोस् बेस ग्रिडमा जानुपर्नेछ। चतुर!
अझै तपाईको ग्रिडको माध्यमबाट पाठ "गाईड" देख्नुहुन्न? तपाईंसँग एउटा अन्तिम सानो कुराको अभाव छ। तपाईंको फाईलमा टेक्स्ट बक्सहरू छनौट गर्नुहोस् र विकल्प छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईं अनुच्छेद प्यालेट भित्र फेला पार्नुहुनेछ जुन बेस ग्रिडसँग प with्क्तिबद्ध भन्छ।
हामी छविमा रातो आइकनमा क्लिक गर्नेछौं जुन हाम्रो पाठ बाकसमा दर्साउनका लागि यो हाम्रो बेस ग्रिडमा समायोजित हुनुपर्छ
एउटा अन्तिम सुझाव। त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जुन फिल्डमा अग्रणी मानको प्रयोगको सट्टा प्रत्येक बढाउनुहोस् त्यो संख्याको आधा प्रविष्ट गर्नुहोस्। हाम्रो उदाहरण मा १.14,4..7,2 pt को आधा .XNUMX.२ pt हुनेछ। यस टेक्निकको फाइदा यो हो कि हामीसँग जब यो लेआउट टेक्स्टको कुरा आउँदछ अधिक लचिलोपन हुन्छ। नोक्सान यो हो कि हाम्रो कागजात पर्याप्त भ्रामक हुन सक्छ क्षैतिज रेखाको अधिकको अस्तित्वको कारण। अझै, म तपाईलाई सल्लाह दिन सिफारिस गर्दछु।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ग्राफिक डिजाइन » InDesign आधार ग्रिड | लेआउट डिजाइनरहरूको लागि ट्यूटोरियल
फोटोग्राफरहरूको लागि १० अनुप्रयोगहरू हुनुपर्दछ